टिपिक्क जिन्स लगाउनुहुन्छ ? रोग लाग्ला है !::Hamro Koshi Awaj / awaz
टिपिक्क जिन्स लगाउनुहुन्छ ? रोग लाग्ला है !
धरानः अर्कोपालि जीन्स पाइन्ट किन्दा आफूलाई सजिलो हुने नै छानेर किन्नुहोला । फेशन देखाउनका लागि शरीरलाई कष्ट हुने पाइन्ट नलगाउनुस् ।
हामीले लगाउने कपडाले हाम्रो शरीरको आकार निर्धारण गर्छ । त्यसैले ब्रा लगाउँदा पनि उमेरअघि नै स्तन नझोल्लिने गरी लगाउनुपर्छ । अनि भुँडीको बोसो लुकाउनका लागि टाइट जीन्स लगाउँदा बोसो माथि सर्छ र जम्मा हुन थाल्छ । अनि त तपाईंको शरीरले अनौठो र असाधारण आकार लिन थाल्छ ।
चिपिक्क टाँसिएका जीन्सले तपाईंको सौन्दर्य बढाउनुपर्नेमा तपाईंको आकार नै बदल्न थालेमा तपाईं तत्काल सचेत हुनुपर्छ । शरीर भनेको प्रकृतिको राम्रो उपहार हो र हामीले यो जस्तो छ त्यस्तै रूपमा स्वीकार्नु जरूरी छ । आफ्नो शरीरलाई माया गर्नुस् । -एजेन्सी
नेपालमा संक्रमण दर दर १८.७ र सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९६.७ प्रतिशत
हामीले लगाएको खोपमा कति प्रतिशत एन्टिबडी बन्यो ?
अकबरे खुर्सानी नियमित सेवन गर्दा हुने १५ फाइदा
वायु प्रदूषणका कारण ५९ लाख बच्चा समयअगावै जन्मन्छन्
मौसम परिवर्तनको कारण हुने रुघाखोकी लागे के खाने, के नखाने ?